बाढी पहिरोपछि दोब्बर बढ्यो तरकारीको भाउ – Sandesh Munch
बाढी पहिरोपछि दोब्बर बढ्यो तरकारीको भाउ
July 23, 2020 174
८ साउन, पोखरा । पोखरा नयाँ बजारकी शान्ता लिम्बुले मंगलबार किलोको ३० रुपैयाँ तिरेर तरकारी किनेकी थिइन् । बिहीबार बिहान तरकारी बजार पुगेर त्यही तरकारी किन्दा एक पाउको ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो ।
बजारमा धेरै तरकारी पनि देखिनन् उनले । सधैं भरिभराउ हुने तरकारी बजार बिहीबार लिम्बुले खाली खाली देखिन् । भनिन्, ‘तरकारी पनि छोइनसक्नु महंगो । खोजेको तरकारी पनि पाइनै छाड्यो ।’ यतिबेला उनीजस्तै धेरै पोखरेलीलाई तरकारीको अभाव र आकासिएको महंगीले तर्साएको छ ।
पछिल्लो हप्ता लगातार भइरहेको वर्षा र त्यसले निम्त्याएको प्राकृतिक विपद्का कारण पोखरासम्म तरकारी आउन नसकेको भन्दै बजारमा तरकारी अभाव हुन थालेको हो । अभाव भएसँगै तरकारीको मूल्य २ दिनमै दोब्बर भन्दा बढी महंगो भएको छ ।
पोखरा तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी संघका अनुसार पोखरामा सबैभन्दा बढी खपत हुने तरकारीमा काउली, बन्दा र टमाटर हो । तर, पछिल्लो समय यी सबै तरकारी बजारमा पाउनै मुस्किल पर्न थालेको छ । ‘मंगलबारसम्म बन्दा किलोको ४० रुपैयाँ पथ्र्यो । अहिले ८०÷९० रुपैयाँ पर्न थालेको छ,’ पोखरा मन्डी सञ्चालक समिति सदस्य दीपक श्रेष्ठले भने ।
बाढी र पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा तरकारीको मूल्य बढ्न गएको व्यवसायीको तर्क छ । उनीहरुले सीधा बाटोबाट तरकारी ल्याउन नसकिने र लामो तथा घुमाउरो बाटोबाट तरकारी ल्याउँदा लागत खर्च नै बढी पर्न गएको बताउँछन् ।
‘पोखरामा तरकारी आउने भनेको धाडिङ र चितवनबाट हो । अहिले दुवै ठाउँमा पहिरोले बाटो बन्द गरिदिएको छ,’ व्यवसायी श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही उपाय नलागेपछि बुटवल हुँदै पाल्पाबाट ल्याउँदा लागत खर्च नै बढी पर्न गएको छ ।’
उनले ढुवानीमा समस्या आएकाले बजारमा तरकारी पाउनै छाडेको र मूल्य पनि बढ्न गएको सुनाए । बाटो सहज नहुँदा एक दिनमा आइपुग्नुपर्ने तरकारी ४÷५ दिनमा बल्ल बल्ल आइपुग्ने र त्यसमा पनि आधाभन्दा बढी तरकारी बिग्रिसक्ने व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
एक्कासी तरकारीको अभाव हुनु र मूल्य आकासिनुको कारण तरकारी कृषक पलायन हुनु पनि रहेको व्यवसायीको ठहर छ । कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनमा सम्पूर्ण होटल व्यवसायी बन्द हुँदा तरकारी बिक्री दर घटी कृषक पलायन भएको पोखरा तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी संघ बताउँछ ।
‘व्यवसायिक रुपमै तरकारी खेतीमा आएका कृषक यति लामो समय लकडाउन हुँदा आत्तिए । उनीहरुले विकल्पको रुपमा बरु धान खेती गरिसकेका छन्,’ पोखरा मन्डी सञ्चालक समिति सदस्य दीपक श्रेष्ठले भने, ‘कृषकले नै उत्पादन बन्द गरेपछि अभाव हुने नै भयो । अभाव भएपछि मूल्य बढ्नु स्वभाविक हो ।’
स्थानीय किसानले भाउ बढाए
बजारमा तरकारीको अभाव देखिन थालेपछि पोखराका स्थानीय किसानले भाउ बढाएको व्यवसायीले बताएका छन् । उनीहरुले तरकारीको थोक मूल्य मै ७५ प्रतिशतसम्म बढाएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘यहाँ उत्पादन पनि घटेको छ । त्यसमाथि भएकाले कृषकले पनि मौका हेरेर मूल्य निर्धारण गरिदिए । त्यसले झन् तरकारीको मूल्य बढायो,’ पोखरा मन्डी सञ्चालक दूर्गा कँडेलले भने, ‘व्यवसायीसँग तरकारी नै छैन । तरकारी नै नभएपछि उनीहरु पनि महंगोमै किनेर महंगोमै बेच्न बाध्य छन् ।’
Prevसुदूरपश्चिम थप ३५ जनामा कोरोना पुष्टि, कञ्चनपुरका मात्रै २६ जना
Nextजहाजमा पुरै सीटमा बस्नेछन् यात्रु, उडान संख्या भने घट्ने
दूधलाई दैनिक आयआर्जनको माध्यम बनाउन‘एक कृषक, एक दुहुनो गाईभैँसी’
भर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ? Watch Video (12454)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10160)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9782)